Moulmein Kitchen: Fried roselle leaves (chin baung kyaw)
Posted by Moulmein Kitchen at Saturday, August 29, 2009
ဒီဝိုင်း (D'vine), August 29, 2009 at 5:53 PM
ဟန်လင်းထွန်း, August 30, 2009 at 10:16 AM
thz for sharing, wil come and pick up cos sometimes loose idea what to cook.
like cooking and eating !!!!!
Moulmein Thu, September 3, 2009 at 7:03 AM
အစ်ကိုဒီဝိုင်း ကိုဟန်လင်းရော အလည်လာ လာအားပေးကြတာ ကျေးဇူးနော် :)
Mettā Mon, May 28, 2010 at 4:42 AM
မျှစ်ကော ထဲ့ဘူးလား? သွားရည်ယိုချရာဂျီး
Mettā Mon, May 28, 2010 at 4:45 AM
အော တွေ့ ဘီ၊ ညှစ်လဲပါဒယ်၊ ချားလိုက် တော့မယ်၊ ဟီး
Moulmein Thu, May 28, 2010 at 7:37 AM
တ၀ကြီး စားသွားနော် :) အလည်ရောက်လာတာ ကျေးဇူးပါ။